Oge Ọgụgụ: 6 nkeji Ekele mgbe a nnọọ omenala ezumike agba gburugburu gburugburu ezinụlọ, toro toro, na football. Otú ọ dị, ndị nọ n’etiti gị ndị njem na-atọ ụtọ ma nwee ike iji ọsọ ọsọ ga-atụle itinye oge ezumike afọ a n’otu n’ime obodo ndị a kachasị mma ileta maka inye ekele na…
Oge Ọgụgụ: 2 nkeji Ị na-achọ ịga leta Norway? Ọtụtụ ndị ọbịa na Europe chọta ụgbọ okporo ígwè eme njem a dara oké ọnụ ụtọ. Ị maara ihe mere? Nke a na-enye ohere Jiz os, na-ewere gị na dreamland of ata ụwa. Tụlee ebe a ụfọdụ n'ime ihe ikwesiri ịma…